Fifidianana FMF: voatazona avokoa ireo kandida 5 hifaninana - ewa.mg
News - Fifidianana FMF: voatazona avokoa ireo kandida 5 hifaninana
Navoakan’ny Comité de normalisation, omaly ny lisitra ofisialy faran’ireo kandida hifaninana amin’ny fifidianana izay hitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Fifidianana hotanterahina ny 24 aogositra ho avy izao any Toliara. Tsy araka ny siosion-dresaka izay nahoraka tato ho ato, izay nilaza fa mety hisy ny ho voailika tamin’ireo kandida tao anatin’ny lisitra voalohany. Voatazona avokoa ireo kandida miisa dimy izay nahafeno ny fepetra amin’ny firotsahana hofidina ho filohan’ny FMF, hahitana an’Andriamiasasoa Doda Nirimboavonjy, i Arizaka Rabekoto Raoul, i Mohamad Abdillah Aboudou, Rakotomamaonjy Neypaitraiky ary Rasoamaromaka Herilalaniaina. Marihina, namoaka ny fanapahan-kevitra ihany koa ilay « commission de recours » mahakasika ny fitarainana nataon’ny kandidà Arizaka Raoul amin’ny hanalana tsy ho mpifaninana ireo kandidà telo, izay nanambara fa efa depiote sy tompon’andraikitra amin’ny antoko miaraka amin’ny fitondram-panjakana izy ireo ka mety hisy ny fitanilàna. Nanamafy ity vaomiera ity fa tsy mitombina ny fitarainana ka dia afaka mirotsaka soa aman-tsara ireo kandidà telo ireo. Anio moa no hanaovana ny antsapaka amin’ny filaharan’ireo kandida 5 ireo.
L’article Fifidianana FMF: voatazona avokoa ireo kandida 5 hifaninana a été récupéré chez Newsmada.
Baolina kitra – CAN 2021 :: Tonga hanoman-tena eto Antananarivo i Melvin Adrien
Nigadona, omaly, teny amin’ ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato i Melvin Adrien, mpiandry tsatokazon’ ny Barean’i Madagasikara, mila ravinahitra any Frantsa. “Misy orinasan-tserasera miara-miasa aminy eto Madagasikara nanafatra azy, noho ny tsy fisian’ny fifaninanana ho an’ny klioba tsy matihanina any Frantsa. Manararaotra izany fijanonany eto izany izy hoentina manomana ny lalaon’ny Barea sy Côte d’Ivoire”, hoy ny loharanom-baovao avy ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra. Fivezivezena malalaka Isan’ireo mpilalaon’ny Barea efatra tsy afaka miakatra kianja hatramin’ny 1 desambra 2020 i Melvin, noho io fanapahankevitra noraisin’ny federasiona frantsay amin’ny fampiatoana indray ny fifaninanam-pirenena tsy matihanina io vokatry ny fiverenan’ny Covid-19 any an-toerana. Voakasik’izany ihany koa i Alexandre Ramalingom (CS Sedan Ardennes) sy Randriambololona Zotsara ary William Gros, samy ao amin’ ny FC Fleury 91. “Efa nojerena manokana ny momba azy efatra mirahalahy ireo. Manaraka fanomanan-tena manokana ihany koa ireto telo farany”, araka ny voalazan’ity loharanom-baovao. Ho an’ireo mpilalao sasany indray dia nahazo taratasy avy tany Frantsa ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, omaly, araka ny nambaran’ny loharanom-baovao hatrany. “Afaka mivezivezy miditra sy mivoaka an’i Frantsa ireo mpilalao rehetra any an-toerana saingy mila manaraka ny fenitra ara-pahasalamana avokoa”, araka ny voalazan’ity fanambaràna ity. Noho izany, tsy manana olana ny fivezivezen’ ireo mpilalaontsika mpila ravinahitra any an-toerana hamonjy ny fihaonana indroa miantoana amin’i Côte d’Ivoire, hotanterahina amin’ny 14 sy 17 novambra ho avy izao. Mbola mipetraka ho olana kosa anefa ny korontana misy any Côte d’Ivoire, taorian’ny fifidianana filohampirenena notanterahina tamin’ ny 31 oktobra lasa teo. Miandry ny fivoriana maikan’ny Kaonfederasiona afrikanan’ny baolina kitra ny fanapahankevitra rehetra. Kisary mety hitranga ny hanaovana ny lalao mandroso sy miverina eto Madagasikara na lalao mandroso any amin’ ny firenena tsy miandany sy lalao miverina eto amintsika. Efa vonona rahateo ny kianjan’ i Barikadimy hampiantrano ny fihaonana. L’article Baolina kitra – CAN 2021 :: Tonga hanoman-tena eto Antananarivo i Melvin Adrien est apparu en premier sur AoRaha.
Mironngatra ny fanolanan-jaza: ankizivavy iray bevohokan-drainy
Efa fiainam-bidy tanteraka ny ataon’ity raim-pianakaviana 44 taona, monina ao Mahatsara, Brickaville. Tao anatin’ny dimy volana ny nanaovany ny herisetra nofo ny zanany vavimatoa vao 15 taona monja. Ankehitriny, mitondra vohoka ratovovavy, efa voasambotra sy nampidirina vonjimaika am-ponja ao Ambalatavoahangy Toamasina kosa ny rainy. Araka ny fanadihadiana, entin’io rangaha io any an-tsaha isan’andro io zanany vavy io. Any izy ireo no mitady sakafo sy mitady kitay handrehetana afo. Mandritra izany, rahonany io zanany io ary hararaotiny anaovany ny filan-dratsiny. « Tsikaritr’ilay reniny ihany ilay tranga, saingy mbola rahonam-badiny izy ka tsy sahy milaza », hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana. Taty aoriana, nitaraina amin’ireo mpiara-monina aminy ravehivavy ka nitory tany amin’ny mpitandro filaminana ireo fokonolona. Vokany, voasambotra, ny alatsinainy teo, ilay raim-pianakaviana ary nanaovana fanadihadiana. Niaiky ny helony izy ary nampidirina am-ponja rehefa nandalo fampanoavana.Ankoatra izay, zazalahikely 10 taona ihany koa voatazona eny amin’ny zaza maditra, omaly, noho ny resaka fanolanana. Miisa fito izy ireo ny voarohirohy amin’izany rehefa avy nametrahana ramatoa iray fitoriana. Miisa enina kosa ireo nahazo fahafahana vonjimaika. Tsy fantatra mazava ny raharaha, saingy milaza ilay renim-pianakaviana fa voaolan’ireo ankizalahikely manodidina ny 6 ka hatramin’ny 13 taona eo ny zanany vavy vao 7 taona. Mipetraka eny Fiakarana Ambohitrimanjaka io renim-pianakaviana io, ary malaza ho ratsy fitondrantena eo amin’ny fiarahamonina. Henintsoa HaniL’article Mironngatra ny fanolanan-jaza: ankizivavy iray bevohokan-drainy a été récupéré chez Newsmada.
Fanararaotana fahasembanana :: Vehivavy marenina nitantara ny fanolanana nihatra taminy
Vehivavy iray, 59 taona, manana fahasembanana amin’ny fihainoana, no nisedra herisetra ara-pananahana nandritra ny taona maro. Niharan’ny fanolanana teo an’ elakelan-trano, teny Mandroseza, teo amin’ny faha25taonany, izy. Tratra ary efa nogadraina ireo lehilahy roa voarohirohy tamin’izany. Nirava avy tany amin’ny toeram-pisakafoana niasany i Soamandamina Baoly Angéline, ilay vehivavy marenina, no naolan’ny lehilahy roa, tsy lavitry ny tanàna onenany. “ Nanaitra ny mpiara-monina ny hiaka mafy sy ny antso vonjiko. Tonga teo ihany koa ny zokiko lahy. Tafaporitsaka ireo olon-dratsy. Nandeha teny amin’ny mpitsabo sy ny polisy izahay. Fantatr’i zokinay ireo mpanolana ka nosamborina. Niaina tamin-tahotra aho, taorian’izay, ka tsy sahy nandeha irery intsony”, hoy ny fitantaran’ity vehivavy marenina tamin’ny alalan’ny mpandika teny. Manambady lehilahy manana olana arapihainoana tahaka azy izy, amin’izao fotoana izao ary manan-janaka roa. Nandritra ny fanamarihana ny andron’ny 8 marsa, natokana ho an’ny fiarovana ny zon’ny vehivavy farany teo, tetsy Behoririka, no nijoroan’ity renim-pianakaviana ity vavolombelona momba ny herisetra nihatra taminy. Fotoana nanaporofoany fa afaka miarina ny vehivavy na dia eo aza ny hetraketraky ny fiaraha-monina sy ny faharefoan’ny paikady mbamin’ny asa natao hiarovana azy ireo, indrindra ireo manana fahasembanana L’article Fanararaotana fahasembanana :: Vehivavy marenina nitantara ny fanolanana nihatra taminy est apparu en premier sur AoRaha.
Filoha Roandey, Paul Kagame: “Mandroso rehefa mahay teny anglisy ny 50% n’ny Malagasy”
Teny tsotra nefa lalina sy misy dikany ary mavesatra. “Mandroso isika rehetra mahay teny anglisy ny 50% n’ny Malagasy”, hoy izy teny am-pahatongavana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, omaly. Tonga nitsena azy teny an-toerana ny filoha Rajoelina mivady sy ny Praminisitra Ntsay Christian ary ireo mpikambana sasany eo anivon’ny governemanta. Roa kosa ireo fiaramanidina nitondra ny delegasiona Roandey tamin’izany.Na tsy mivantana aza fa amim-pomba diplaomatika, mitaky ezaka amin’ny rehetra raha te handroso ny tian’ny filoha Kagame hambara. Nampiray ny fahasamihafana tao aminy i Roanda vao tafavoaka ho anisan’ny firenena misandratra aty Afrika . Tokony hanetsika sy hanaitra ny hambom-pirenen’ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra izany. Tsy midika ho ilay teny anglisy avy hatrany koa ny tiany ambara fa ilay fomba fisainana sy ny hoenti-miaina eo amin’ny samy Malagasy. Tahaka ny nataon-dry zareo… Tokony hitovy fomba fijery ny 50% an’ny Malagasy. Na ilay teny koa aza anefa, te hampita hafatra izy fa anisan’ny mampandroso ny teny anglisy.Tsiahivina fa niara-nisakafo amin’ny filoha Rajoelina mivady teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny filoha Kagame mivady, omaly alina.Synèse R. L’article Filoha Roandey, Paul Kagame: “Mandroso rehefa mahay teny anglisy ny 50% n’ny Malagasy” a été récupéré chez Newsmada.